कुन देशमा मृत्यु सबैभन्दा सहज ? ८१ देशको सूचीमा ब्रिटेन सबैभन्दा अगाडि, नेपाल कतिमा ? | Ratopati
विश्वमा जीवनलाई मात्रै होइन, मृत्युलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने गरिन्छ । सबै व्यक्तिले राम्रो जिन्दगी र शान्तिले प्राण जाओस् भनेर प्रार्थना गर्ने गर्छन् । जुन देशको आर्थिक अवस्था राम्रो छ ति देशहरुमा मानिसको मृत्यु पनि सहज नै हुन्छ तर, गरिब देशहरुमा व्यक्तिको मृत्यु भने पीडादायी हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । वैज्ञानिकहरुले हालै क्वालिटी अफ डेथ एण्ड डायिङ इन्डेक्स २०२१ मार्फत विश्वमा सहज मृत्यु भएका देशहरुको बारेमा बताएका छन् ।
उक्त सूची अमेरिकाको ड्युक युनिभर्सिटीले अनुसन्धानमार्फत तयार पारेको हो । यसमा विश्वभरका ८१ देशमा जिन्दगीको आखिरी दिनहरुमा हुने हेरचाहको आधारमा ए, बी, सी, डी, ई र एफ ग्रेड दिइएको छ । रिपोर्टका अनुसार केवल ६ देशलाई ए ग्रेड र २१ देशलाई एफ ग्रेड दिइएको छ ।
उक्त इन्डेक्सका अनुसार युनाइटेड किङडम (युके) पहिलो स्थानमा छ । यसका साथै, आयरल्याण्ड, ताइवान, कोस्टा, रिका, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियालाई पनि ए ग्रेड दिइएको छ । यी देशहरुमा अन्तिम अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरुको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने गरिन्छ ।
विश्वका ८१ वटा देशहरुमा प्याराग्वेलाई ८१ औं स्थानमा राखिएको छ । यो देशमा अन्तिम अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई सहज वातावरण प्रदान गरिदैँन । बंग्लादेश, लेबनान, ह्याती, ब्राजिल, सेनेगल, पोर्तुगल, दक्षिण अफ्रिका, आर्मेनिया, अर्जेन्टिना, नेपाल, सुडान, मलेशिया, इथियोपिया र इराक जस्ता देशहरुलाई एफ ग्रेड प्रदान गरिएको छ ।
भारतलाई डी ग्रेड
उक्त इन्डेक्सका अनुसार भारतलाई डी ग्रेड प्रदान गरिएको छ । भारतका साथै चीन, रुस, ग्रीस, इन्डोनेशिया, चिली, जर्जिया, भियतनाम र मेक्सिकोलाई पनि डी ग्रेड दिइएको छ । यस्तै, अमेरिकालाई सी ग्रेड दिइएको छ । अमेरिकाका साथसाथै कोलम्बिया, म्यानमार, मेक्सिको, थाइल्याण्ड, मिस्ना, घाना, इजराइल, युगान्डा, डेनमार्क र नाइजेरियालाई सी ग्रेड प्रदान गरिएको छ ।
अध्ययनमा संलग्न स्टीफन कोनरका अनुसार राम्रो ग्रेड हुने देशहरुको आर्थिक आम्दानी राम्रो छ । त्यहाँको सरकारले बाँकी देशको तुलनामा नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको पाइएको छ । जुन देशको ग्रेड राम्रो छैन ति देशको सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको पाइदैन ।
आमाबाबुका यी साना गल्ती : जसले बच्चालाई जिद्दी बनाउन सक्छ
सम्बन्ध बिना एउटै छतमुनी बस्ने श्रीमान्–श्रीमती, यस्तो छ सेमी–सेपरेशनको वास्तविकता
कसैलाई मोटो वा पुड्को नभन्नुहोस्, यस्ता व्यक्तिले तपाईंको ज्यानै लिन सक्छन्, थाहा पाऔँ यो कस्तो रोग ?
युरोप–अमेरिकामा विफरजस्तै मङ्कीपक्स संक्रमण फैलिन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मी सतर्क
कोभिड–१९ बाट दस लाख नागरिक गुमाउने पहिलो मुलुक बन्यो अमेरिका
युवावस्थामा नै किन बढ्दै छ ब्लडप्रेसर ?